Xildhibaan Cusub oo Maanta lagu Doortay Muqdisho (Daawo Sawiro) – STAR FM SOMALIA
Doorashada Xubnaha Aqalka hoose ee matalayaasha Somaliland, ayaa maanta mar kale dib uga bilaabatay Magaalada Muqdisho, iyadoo la soo doortay Xildhibaano cusub.
Xildhibaano gaaraya Afar xubnood ayaa lagu doortay Xarunta Gaadiidka Booliska ee Doorashada ay ka socotay.
Xubnaha maanta la doortay waxaa ka mid ahaa Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga Somaliya Xuseen Carab Ciise oo mar kale nasiib u yeeshay inuu ka mid noqdo Xildhibaanada cusub ee Somaliya.
Xildhibaanada la soo doortay ayaa kala ah Biixi Imaan Cige, Cabdirisaq Dahir Mohamud, Sicid Mohamed Mohamud iyo Xuseen Carab Ciise.
Guddiga Doorashooyinka Matalayaasha Somaliland ayaa sheegay Doorashada maanta in lagu doortay kaliya Afar Xildhibaan oo cusub.
Shabaab oo soo bandhigay Xubno ka tirsan Ergada Doorashada Aqalka hoose (Daawo Sawiro)